Nagarik News - ''सनी लियोनजस्तै देखिन्छौ' भन्दा चित्त दुख्छ'
होमपेज / अर्थ / कला / ''सनी लियोनजस्तै देखिन्छौ' भन्दा चित्त दुख्छ'
''सनी लियोनजस्तै देखिन्छौ' भन्दा चित्त दुख्छ'	21 Jan 2016 | 14:02pm बिहीबार ७ माघ, २०७२
वर्षा शिवाकोटी जति चर्चामा छिन्, त्यति धेरै काम गरेकी छैनन् । फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल २' बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी उनलाई यही फिल्मले चर्चामा ल्याइदियो । तर, फिल्ममा उनको भूमिका चर्चा भएअनुसार थिएन । सोही फिल्मका कारण म्युजिक भिडियोमा भने उनलाई कामको चाप नै छ । वर्षासँग डिबी खड्का र अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानीः अहिले कामको खडेरी छ वा वर्षा भइरहेको छ ?दुवै छैन भन्नुपर्ला । म्युजिक भिडियोको काम गरिरहेकी छु । फिल्म 'पशुपतिप्रसाद'को प्रमोसनमा पनि अलिअलि कुदिरहेकी छु । बल्ल ब्याचलरको फाइनल इयरको परीक्षा सकियो । अब दुईतीन वर्ष ढुक्क भएर काम गर्ने सोचमा छु ।भनेपछि पढाइ र कामलाई सँगसँगै लग्दा गाह्रो भइरहेको थियो ?हो नि । ब्याचलर जोइन नगरीकन अभिनयमा लागेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर, बीबीए पढ्दापढ्दै अभिनयमा लागेकी हुनाले दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रह्यो । पढाइ र काम दुवै सँगसँगै गर्दा अलिअलि गाह्रो नै हुँदो रहेछ । पढाइमा दबाब हुन्थ्यो । ६–६ महिनामा परीक्षा दिनुपथ्र्यो । एकदम गाह्रो हुन्थ्यो । बल्ल फाइनल एक्जाम सकियो । अब फ्री भएँ । राम्रो कामको अफर आयो भने अब दुईतीन वर्ष राम्रैसँग लाग्ने सोच छ ।पढाइमा त तपाईं 'फस्टगर्ल' रे !त्यस्तै भन्नुपर्ला । स्कुलदेखि नै फस्ट हुँदै आइरहेकी हुँ । प्लस टूमा पनि फस्ट नै भएँ । ब्याचलरमा भने ब्याक लागेन, त्यस्तो राम्रो पनि भएन ।त्यसो भए त यो क्षेत्रमा लाग्दा अभिभावकबाट 'पढाइ बिग्रिएला' भन्ने दबाब पनि खेप्नुभयो होला ?हो नि । मेरो परिवारमै कला क्षेत्रमा लाग्ने म पहिलो हुँ । म चाहिँ सानैदेखि नाच्न र गाउन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थेँ । पारिवारिक जमघट होस् या कुनै कार्यक्रम, म नाचिहाल्थेँ । तर, अभिभावकले भने पढाइको चिन्ता सधैँ गर्नुहुन्थ्यो । 'पढाइ पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ' भन्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि भन्नुहुन्छ । मैले जब फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल २' मा छोटो भए पनि राम्रो भूमिकामा अभिनय गर्न पाएँ, त्यसपछि प्रतिक्रिया पनि राम्रै आयो । परिवारबाट पनि पढाइलाई असर नपारिकन काम गर्न सहयोगै मिलेको हो । मैले पनि अहिलेसम्म आफूलाई मेन्टेन गरिरहेकी छु ।भूमिका छोटो समयको भए पनि तपाईं त्यो फिल्मबाट राम्रैसँग नोटिस्ड हुनुभयो है ?त्यस्तै भन्नुपर्ला । निर्माण टिमबाट पनि मलाई 'डेब्यू हिरोइन' भनेरै प्रचार गरियो । पोस्टरमा पनि मेरो भूमिका मुख्य भएको झल्काउने खालकै तस्बिर राखियो । त्यही भएर धेरैले मलाई चिनेका हुन् । मेरा आफन्त, साथीभाइ पनि त्यतिबेला निकै उत्साहित थिए । पछि फिल्म हेरिसकेपछि भने निराश भएछन् । 'कति सानो रोल रैछ तिम्रो त' भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । तर, म खुशी नै थिएँ । मैले भूमिका चित्त बुझेरै अभिनय गरेको थिएँ । म फेरि यो क्षेत्रमा हिरोइन नै बन्छु भनेर आएको पनि त होइन । मलाई मन प¥यो र म कन्भिन्स्ड भएँ भने जस्तोसुकै भूमिका पनि काम गर्छु ।त्यसरी 'नोटिस्ड' हुनुभएको मान्छे लामै समय फिल्ममा देखिनुभएन नि ?फिल्ममा अफर नै नआएको त होइन । तर, पढाइका कारण थुप्रै रिजेक्ट गर्नुप¥यो । फेरि, म यो क्षेत्रमा नयाँ पनि थिएँ । त्यही भएर अलमलिएको पनि हो । केही काम गर्नुभन्दा अघि निर्देशक विकास आचार्य दाइसँग सल्लाह लिन्थेँ । हत्तपत्त फिल्ममा हात हाल्न पनि डर लाग्यो । बीचमा 'रामलीला' भन्ने फिल्ममा काम गर्ने कुरा पनि भयो । पछि त्यो फिल्म त्यत्तिकै भयो । त्यसपछि त झन् काम गर्नै निर्णय सुनाउनुअघि सोच्नुपर्ने देखियो । फिल्ममा काम नगरे पनि म्युजिक भिडियो त थुप्रै गरियो । करिब ५०–६० म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेँ ।'नाइँ नभन्नू ल २' मा खेल्ने मौका चाहिँ तपाईंलाई कसरी जुर्यो ?दुई वर्ष अघिको कुरा हो । मिस्टर एन्ड मिसेस कलेजको कार्यक्रम भइरहेको थियो । मैले पनि नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिएँ । त्यहाँ निर्णायकका रूपमा एकजना सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो । मेरो नृत्य हेरिसकेपछि उहाँले 'फिल्मको अफर आयो भने एक्टिङ गर्न सक्छौ ?' भनेर सोध्नुभएको थियो । म पनि फिल्ममा भन्नेबित्तिकै फुरुङ्ग भएर 'सक्छु' भनिदिएँ । पछि निर्देशक विकास आचार्य दाइ 'नाइँ नभन्नू ल २'का लागि एकजना 'फ्रेस केटी चाहियो' भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ । मकहाँ कुरा आइपुग्यो । फिल्ममा सुरजसिंह ठकुरी, प्रियंका कार्की, जीवन लुईंटेल, सरोज खनाललगायत कलाकारको अभिनय छ भनेको सुन्दा उत्साहित भएँ । अनि, सीधै सुटिङ भइरहेको सेटमै गए । विकास दाइले पनि 'भनेको जस्तै फेस' भेटे भन्नुभयो । म त नर्भस भइसकेकी थिएँ । 'अभिनय गर्न सक्दिनँ होला' भने । विकास दाइले 'तिमी कन्फिडेन्ट मात्र भएर आऊँ, अरू हामी गर्छौं' भन्नुभयो । त्यतिबेला फिल्मको छायांकन सकिनै लागेको थियो । त्यसरी मैले काम पाएकी हुँ ।'नाइँ नभन्नू ल २'मा 'छोटो भूमिका रहेछ' भनेर गुनासो गर्नेहरू तपाईंको दोस्रो फिल्म 'पशुपतिप्रसाद'बाट सन्तुष्ट होलान् ?'पशुपतिप्रसाद' पूर्णरूपमा चरित्रप्रधान फिल्म हो । त्यही भएर स्वाभाविक रूपमा यो फिल्ममा अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने नै फोकस हुनुहुन्छ । तर, मेरो भूमिका पनि कमजोर छैन । मेरो क्यारेक्टर अलिकति सस्पेन्स नै छ । त्यही भएर ट्रेलरमा झसक्क देखाइएको मात्र हो । 'हिरोइन पनि छ है फिल्ममा' भन्ने महसुस गराउनका लागि मात्र मलाई ट्रेलरमा देखाइएको हो । अरू दुईतीनजना प्रमुख पात्र त अझ देखाइएकै छैनन् । अर्को कुरा, म यो फिल्ममा 'लिडिङ हिरोइन' हुन्छु भनेर काम गरेको पनि होइन । कथा मनपरेर काम गरेकी हुँ । र, मलाई विश्वास छ यो फिल्मबाट मेरा शुभचिन्तकहरू पहिलेको जस्तो निराश नहोलान् । फिल्म हेरिसकेपछि मेरो चरित्रबाट 'कन्भिन्स्ड' होलान् भन्ने लागेको छ ।'पशुपतिप्रसाद'को हिरोइन बन्ने अफर चाहिँ तपार्इंलाई कसरी आइपुगेको हो ?'नाइँ नभन्नू ल २' र निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालको फिल्म 'झोले'को पोस्टप्रोडक्सन एकै ठाउँमा भइरहेको थियो । त्यतिबेलै दीपेन्द्र दाइसँग मेरो भेट भएको थियो । उहाँले त्यतिखेर नै मलाई 'मेरो अर्काे फिल्ममा' भन्नुभएको थियो । त्यही कुरा अनुरूप पछि उहाँहरूले 'पशुपतिप्रसाद'मा मलाई लिनुभएको हो ।तपाईं जो सँग काम गर्नुहुन्छ, त्यसले अर्कोलाई सिफारिस गरिदिन्छ है ?त्यस्तै भन्नुपर्ला । मैले अहिलेसम्म अभिनय सिकेको पनि छैन । नाच्न चाहिँ सानैदेखि जान्दछु । 'एक्सप्रेसन'चाहिँ दिनसक्छु जस्तो लाग्थ्यो । तर, काम गर्दैै जाँदा सबैले स्विकारी नै रहनुभएको छ । जसकारण म पनि 'मोटिभेट' हुँदै गए । फिल्म 'सुब्बा साब'मा पनि सरोज खनाल दाइका कारण पुगेकी हुँ । नयाँ हिरोइनको खोजी भइरहँदा उहाँले मेरो नाम लिइदिनुभएछ । 'नाइँ नभन्नू ल २'मा सँगै काम गरेपछि उहाँ मबाट प्रभावित हुनुभएको क्यारे ।तपाईं डेब्यू फिल्मबाट हुनुभयो । तर, चर्चा म्युजिक भिडियोमा छ नि ?त्यो पनि हो । मैले सुनेको छु, धेरैले यो क्षेत्रमा चर्चा कमाउन लामो समय संघर्षदेखि गरिरहनुभएको छ । कतिले मसँगै पनि कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो सुन्दा त म 'लक्की' रहेछु भन्ने महसुस हुन्छ । फिल्ममा पनि 'हिरोइन' नै नभई 'हिरोइन'का रूपमा चर्चा कमाउने सायद म नै होला ।हामीकँहा हिरोइन भएपछि फिल्ममा 'लभ पर्ने', 'नाँच्ने', 'गाउने' सबै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तपार्ईंलाई यस्तो चरित्रमा चाहिँ कहिले देख्न पाइन्छ ?मलाई एउटा राम्रो कलाकार बन्ने इच्छा छ । खासमा अभिनय नै गर्न सक्दिनँ भनेर हिँडेको मान्छे हुँ म । तर, यहाँसम्म आइपुगेँ । प्रत्येक फिल्ममा आफूलाई निखार्दै लैजाने सोचमा छु । फिल्म 'सुब्बा साब'मा मलाई दर्शकले एउटा प्रेमिका, श्रीमतीदेखि बुहारीसम्म सबै रोलमा देख्न सक्नुहुनेछ ।'रिल'मा त देख्न पाइने भो । रियलमा चाहिँ कहिले देख्न पाइने हो ?अहिले बिहे गर्ने त कुरै छैन । करिअर बनाउनतिर लागेको छु ।यति राम्री हुनुहुन्छ । मरिमेट्ने 'फ्यान' त थुप्रै होलान् ?त्यस्तो हिट पनि भइसकेको छैन । ठूलो क्रेज बनिसकेको छैन् । बनाउने क्रममा छु । नढाटी भन्नुपर्दा अब त कसैले प्रस्ताव गरिहाल्यो भनेपछि जिस्केको जस्तो लाग्छ । 'फ्यान' ठानेर वास्तै गर्दिनँ । पहिले–पहिले कलेजमा जसरी प्रस्ताव आउँथ्यो, त्यसरी अहिले आउँदैनन् । कसैले गरिहाल्यो भने पनि मनैदेखि भनेको कि रमाइलो गरेको हो भन्ने 'कन्फ्युज' भइन्छ ।फिल्म क्षेत्रमा त मोडल निराजन प्रधानसँग तपाईको प्रेम चर्चा पनि खुबै चल्यो ?हो नि । तर, हामीबस्च त्यस्तो कुनै सम्बन्ध थिएन । म्युजिक भिडियो गर्ने क्रममा लगातार भेट भइरहने, भूकम्पको बेला राहत वितरण अभियानमा सँगै भएका कारण थुप्रैले नकरात्मक रूपमा चर्चामात्र चलाइदिएका हुन् । हामीले भ्यालेन्टाइन डेको बेला सँगै फोटोसुट गरेपछि पनि थुप्रैले शंकाको दृष्टिले हेरेछन् । तर, हामी मिल्ने साथीमात्र हौँ ।तपाईं फिल्म क्षेत्रमा एक्कासी आइपुग्नुभयो । आफूले सोचेको भन्दा के फरक पाउनुभयो ?राम्रा–राम्रा फिल्म बनिरहेको समयमा म यो क्षेत्रमा आइपुगेँ । स्थिति राम्रो भइरहेका बेला म यो क्षेत्रमा आइपुगेको जस्तो लाग्छ । बाहिरबाट यो क्षेत्रलाई जति नकरात्मक रूपमा हेरिन्छ, त्यस्तो छ जस्तो लागेन । थरीथरीका मान्छे भेटेँ । सबैलाई चिन्ने मौका पाइँदोरहेछ । 'सुब्बा साब'को सुटिङका क्रममा एक महिना चितवन बस्दा उपत्यका बाहिर कलाकारलाई ठूलो सम्मान हुँदोरहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ ।तपाईंलाई के–के कुरामा चित्त दुख्छ ?यो क्षेत्रको छाप नै यस्तरी बसेको छ कि आफ्नै मान्छेले पनि 'नेगेटिभ वे'मा हेरिदिन्छन् । त्यतिबेला चाहिँ दुःख लाग्छ । 'यो क्षेत्रमा लाइफ नै छैन । पढिरहेको मान्छे किन यहाँ अड्किएको होला' भन्दै कुरा काट्छन् । त्यतिबेला चित्त दुख्छ । सबैलाई कन्भिन्सड गर्न नै गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा, कलाकार भएपछि 'ओपन्ली' हिँड्न पाइँदैन रहेछ । साथीसँग घुम्न जाँदा होस् वा फेसबुकमा फोटो अपलोड र स्ट्याटस लेख्दा, निकै सचेत हुनुपर्दाे रहेछ । झन् केटासाथीसँग त हिँड्नै नहुने, 'यसको त योसँग लभ प¥यो' भन्दिहाल्छन् ।तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंको अनुहारलाई बलिउडका हिरोइनसँग दाँजेर हेर्छन् नि ?किन थाहा नहुनु ? अस्ति भर्खर शुक्रवारमै 'ब्लोअप' छापिँदा थुप्रै अनलाइन र पत्रिकाले 'सनी लियोनजस्तो' भनेर छापे । मलाई पनि थुप्रैको प्रतिक्रिया त्यस्तै आयो । त्यतिबेला त मलाई एक घण्टामा ६ सयवटा फ्रेन्ड रिकवेस्ट आयो । हटाउँदाको सास्ती भयो । धेरैले मलाई कैट्रिना कैफ र जरिन खानजस्तो जस्तो पनि भन्छन् । कैट्रिनासँग दाँज्दा त खुशी लाग्छ । तर, सनीसँग दाँज्दा चाहिँ अलि दुःख लाग्छ । उनी नराम्री भएर त होइन, तर नराम्रो छापका कारण । « मुसहर बस्तीमा धुर्मस र सुन्तली
वडा नम्बर ६ जापानमा प्रदर्शन गरिने »